Ethiopia: 14 Ruux oo Lagu Xukumay Addis Ababa – Rasaasa News
Jun 9, 2011 Dagaalkaas ka dib, Eritrea, Ethiopia: 14 Ruux oo Lagu Xukumay Addis Ababa, hadan marna ma istaagin dareen dagaal oo dhexmara labada dal., isal wasaare Meles Zinawi. In kasta oo sanadkii 2000 heshiis ay ku saxiixeen Aljeris, waxay waday dagaal ay doonayso in ay xukunka kaga tuurto Ra
Addis Abab, June 9, 2011 [ras] – Maxakamada sare ee federalka Ethiopia, ayaa fulisay xukun u dhaxeeya cimrigaa ha ku furto iyo sagaal sano. Xunkaas oo lagu fuliyey 14 ruux oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen werar bambaanooyin la damacsanaa in lagu qarxiyo xarunta dhexe ee midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa.
Xaakimka maxkamada sare ayaa riday xukunka maalintii Abacada ahayd. Xaakimka ayaa sheegay in 14-ka ruux ay ka dambeeyeen qorshe ah qaxin babaanooyin meelaha muhiinmka ah ee magaalada Addis Ababa, oo ay ku jiraan dhismayaasha dawlada iyo xarunta Afrikanka ee ku yaal caasimada.
Afar ka mid ah eedaysanyaasha waxaa lagu xukumay cimrigaa ha ku furto, Lix ka mid ah 14-ka ruux waxaa lagu xukumay 25 sano, hal ruux waxaa lagu xukumay 14 sano iyo saddex oo lagu xukumay 9 sano. Maxkamadu waxay sheegtay in 14 ruux ee damcsanaa qaraxyada in dalka Eritrea lagu siiyey tababar sida wax loo qarxiyo ah.
Dawlada Ethiopia ayaa si joogta ah u eedaysa Eritrea oo ah dal iyada ka qaatay xoriyad sanadkii 1991, ka dib kolkii ay wadeen dagaal 30 sano xidhiidh ah.Labada dal waxaa dhexmary dagaal faraha laggaga gubtay oo ka kacay khilaaf xuduuda ah sanadihii 1998-2000, kaas oo ay ku dhinteen 80, 000 oo ruux.
Eritrea waxay hoy u tahay tiro mucaarad ah oo ku kacsan dawlada ka jirta dalka Ethiopia iyo waxaa kale oo ay hoy siisaa ururada xag jirka ah ee ka jira Geeska Afrika.
Dagaalkaas ka dib, Eritrea, waxay waday dagaal ay doonayso in ay xukunka kaga tuurto Ra,isal wasaare Meles Zinawi. In kasta oo sanadkii 2000 heshiis ay ku saxiixeen Aljeris, hadan marna ma istaagin dareen dagaal oo dhexmara labada dal.